Doodle Dash bụ aka ịbịaru platformer na akụkọ | Gam akporosis
Doodle Dash bụ egwuregwu ọhụụ na-adịghị agwụ agwụ nke gam akporo na ihe e ji amata site n'aka dị ka ọ bụ. Onye na-agba ọsọ enyi ga-enwe ike ịwụli ma slide ebe ọ na-ezere ịdaba na abis na-aga site na ikpo okwu ruo n'elu ikpo okwu.
A egwuregwu nke dị nnọọ mma risịrị na nke a ihe karịrị na-akpali ọgwụgwọ nke akụkọ ihe mere eme na-iche nke mere na o bughi arcade di nfe. N'ezie, anyị ga-enwerịrị nkọwapụta teknụzụ dịka ahịhịa ndị ahụ na-agagharị ka onye ọhụụ anyị na-agabiga, ma ọ bụ otu o si efue mgbe ọ metụrụ ọkụ na mberede ọkụ. Ka anyi jiri ihe egwuregwu a na-aiousuri egwu.
2 Ima elu ma slide na-akwụsị na Doodle Dash
3 Egwuregwu dị iche iche
Doodle Dash bụ ọhụụ ọhụrụ aka na-adọta anyị site na egwuregwu mbụ na-enwe nyiwe na-eme na-akpaghị aka oge ọ bụla anyị egwu. Na eziokwu bụ na ọgbọ nke ọkwa ahụ n'ụzọ dị otú a dị ezigbo mma, ọ na-esiri ya ike ịhapụ ya na ọ bụ aka.
Ọrụ aka anyị na-ekwu na onye nrụpụta etinyela nyiwe n'onwe ya na ihe ndi ozo nke egwuregwu. N'okwu a, emeela ya nke ọma na ọ dịghị mfe inwe ọganihu ka anyị wee lebara nnọọ ihe ndị ahụ na-akpata esemokwu anya ga-anwa ime ka anyị tufuo ndụ mgbe anyị nwụsịrị.
Ma ọ bụ ya anyị nwere 3 ndụ na ngụkọta ijikwa enyi anyị enyi, onye ọbụna n'oge ụfọdụ ga-ebu nche anwụ ka ọ ghara ide mmiri na ihu ifufe ahụ, n'ụzọ nke na ọ bụrụ na anyị pịa n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ọ na-amị, ma ọ bụrụ na anyị emee ọ dị n'akụkụ nke ọzọ ọ na-awụli elu.
Ima elu ma slide na-akwụsị na Doodle Dash
Ka anyị na-edebe pịa otu akụkụ ma ọ bụ ọzọ nke ihuenyo anyị protagonist ọ ga-awụli elu karịa ma ọ bụ pekarịa, dịka mgbe ọ na-amị, otu ihe na - eme. Anyị ga-enwerịrịrị nrị elu abụọ na ọtụtụ oge anyị ga-eji ya iji nwee ọganiihu nke ọma.
E nwekwara a usoro nka na nkwalite na anyị nwere ike inweta mkpụrụ ego anyị na-enweta oge ọ bụla anyị na-egwu. Ọbụna inwe ike itinyekwu obi ma ọ bụ jiri ikike ndị ọzọ nke na-enye anyị ụma ụfọdụ gaa n'ihu na-aga n'ihu.
Ọ bụ eziokwu na ya ụzọ ịghọta random na-enye ya ya, na ọ bụ na ọbụna n'ọtụtụ oge, anyị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri jet maka ihe ijuanya anyị. Ọ bụ ya mere egwuregwu ọ bụla ji dị iche ma nwee mmetụta nke igwu egwu otu na ibe ya.
Na nke ahụ aghara, ee na anyị na-ahụ ụfọdụ nkwarụ karịa ibe anyị dị ka mgbe anyị si n’elu ugwu daa wee si n’elu daa ka anyị wee ghara ịchịkwa ma ọ ga-adị n’elu ikpo okwu. Ma ọ bụ na ọtụtụ oge anyị ga-eme ya ọzọ ịda ma tufuo ndụ ọzọ.
Doodle dash bu a ezigbo ezigbo egwuregwu anya na na aka ịbịaru na ndị nkọwa na-eme ka ihuenyo n'ime a visual ahụmahụ na anyị nwere ike ikwu na ị na-enwe. Eziokwu dị ka onye isi anyị na-apụ n'anya mgbe anyị metụrụ ọkụ ahụ bụ ihe atụ doro anya na ha achọghị iweta egwuregwu nkịtị.
Doodle Dash dị n'efu na Storelọ Ahịa Play ya mere ị nwere ike ịchọpụta akụkọ ntolite ya, ọ bụ ezie na ọ dị na Spanish ma anyị enweghị echiche ọ bụrụ na ọ ga-akwụsị ịtụgharị. Ma ọ bụrụ na ị na-aga ise echefula egwuregwu a ọzọ.
A nkịtị nke ọma rụrụ na na nko site na nke mbụ nke abụọ ya aka osise na ya set nke nkọwa na ịtụnanya.
Aka osise na mmegharị
Nsogbu nke gburugburu na ọkwa
Zọ egwuregwu dị iche iche
Ike ịgba ịnyịnya ugbo elu
Ọ bụghị n’asụsụ Spanish
Si n’elu dapụ ga-atụfu ndụ
Developer: Ghostfall nka
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gbaa, wụli na slide na egwuregwu aka ejiri akpọ Doodle Dash